Izikolo ezili-10 eziGqwesileyo zonyango e-UK2022
Disemba 9, 2021 UHarrison uGrace
Izikolo ezili-10 eziGqwesileyo zonyango e-UK
Ngaba ukhe weva ngezikolo zonyango e-UK? Zingaphezulu kwama-20 izikolo zonyango e-UK. Inqaku ngezantsi kuchaza ezona zikolo zibalaseleyo zezonyango ezili-10 e-UK. Ungafuna ukuzizamat.
I-United Kingdom (e-UK) lilizwe lesiqithi elikumntla-ntshona welizwekazi laseYurophu. Ibandakanya ubukhulu becala iGreat Britain (eNgilani, eWales, naseSkotlani) kunye nenxalenye esemantla yesiqithi saseIreland (kuMntla Ireland). Inezinye iziqithi ezincinci. I-UK iphantsi-empuma. Ineentaba ezinokufumaneka kumantla eNgilani, eSkotlani, kuMntla Ireland naseWales.
Inkqubo yemfundo e-UK yahlulwe yangamacandelo amane:
imfundo yamabanga aphantsi;
imfundo eqhubekayo kunye
Kulindeleke ukuba wonke umntwana wase-UK abe nemfundo yakhe yaseprayimari neyesekondari ngokusemthethweni eyenzeka xa umntwana emalunga neminyaka emi-5 de umntwana abe neminyaka eli-16 ubudala.
Inkqubo yemfundo e-UK yahlulwe yaba “ziNqanaba” zilandelayo, kwaye ziquka:
Inqanaba 1: 5 ukuya kwi-7 iminyaka
Inqanaba 2: 7 ukuya kwi-11 iminyaka
Inqanaba 3: 11 ukuya kwi-14 iminyaka
Inqanaba 4: 14 ukuya kwi-16 iminyaka
Ukusuka apha ngasentla, sinokuthi e-UK, imfundo yaseprayimari iqala kwiminyaka eyi-5 kwaye iqhubela phambili kude kube yi-11 yobudala, equka inqanaba elinye kunye nesibini phantsi kwenkqubo yemfundo yase-UK.
Kwakhona, e-UK, ezinye izikolo zaseprayimari zahlulwe zaba ngamanqanaba oMntwana kunye naBantwana. Ngokuqhelekileyo zizikolo ezahlukeneyo kwindawo enye. Inqanaba leentsana linoluhlu lweminyaka yobudala (iNqanaba loku-1), elisusela kwisi-5 ukuya kwelesi-7. Inqanaba leJunior linoluhlu lwalo lobudala (inqanaba lesi-2) ukuya kutsho kwiminyaka yesi-7 ukuya kwe-11.
Oku kusebenza nakwamanye amanqanaba, apho umntwana enemfundo yakhe yamabanga aphakamileyo (kumanqanaba asezantsi nakwaphezulu) nto leyo edla ngokwenzeka xa umntwana eneminyaka eli-11 ubudala aze aphele eneminyaka eyi-16. Ubudala be-16 bubalulekile kuba umntwana ulungele inqanaba elilandelayo lobomi bakhe, ngoko uhlala kuviwo (GCSE).
Izifundo ezikhethwa ngumntwana kunye neziphumo zeGCSE zibaluleke kakhulu kwi-Further Studies (i-A-Level okanye i-IB) kunye nokwamkelwa kwakhe eYunivesithi.
Kwinkqubo yemfundo yase-UK, xa umntwana efikelela kwiminyaka eyi-16 ngese, unokuqalisa iprogram ye-2 yeminyaka ekhokelela kwiimviwo zenqanaba le-A (Advanced). Abafundi basebenza ngokukhethekileyo kwizifundo ezi-3 okanye ezi-4, ezidla ngokuhambelana nezifundo zesidanga abanqwenela ukusilandela eyunivesithi. Amanqanaba ziimviwo zikarhulumente kwaye amkelwa kuzo zonke iiyunivesithi zase-UK nangamaziko kwihlabathi liphela.
Ekupheleni koNyaka we-13, kulandela iimviwo kwisifundo ngasinye, abafundi bafumana iSatifikethi se-A-level.
E-UK, isidanga saseBritane sithatha iminyaka emithathu ukuyigqiba kwaye uninzi lunikezelwa kwinqanaba leehonours. Imizekelo yezidanga zokuqala zezi B. A (Bachelor of Arts), B.Eng (Bachelor of Engineering), kunye B.Sc (Bachelor of Science).
Kwakhona, qaphela ukuba iikholeji zakwarhulumente zibonelela ngeediploma zeminyaka emi-2 ezibonelela ngokukhululwa kunyaka wokuqala kwaye ngamanye amaxesha unyaka wesibini wenkqubo yesidanga kubafundi. Ezinye iikholeji zokufundisa zabucala zibonelela ngeprogram yediploma yonyaka omnye elingana nonyaka woku-1 weyunivesithi. Abafundi abathatha iidiploma zonyaka omnye bawongwa ngokungenela unyaka wesibini kwezinye iiyunivesithi. Nangona kunjalo, zonke ezi zinto zenzeka ngenxa yokuba umntwana uphumelele amanqanaba ka-A ngempumelelo.
IZikolo zezoNyango kwiiMfuno zokuNgena zase-UK
Usifaka njani isicelo kwiSikolo sezoNyango e-UK
Imperial College yaseLondon
IKoor College yaseLondon
I-London School of Hygiene kunye neTransic Medicine
IYunivesithi yaseMary Mary yaseLondon
Ii-FAQ kwiZikolo zezoNyango ezili-10 eziBalaseleyo e-UK
Sesiphi esona sikolo sobugqirha silula ukungena e-UK?
Ngaba isikolo sezonyango sisimahla e-UK?
Mingaphi iminyaka isikolo sezonyango e-UK?
Zingaphi izikolo zonyango e-UK?
Ngaba zikho izikolo zonyango e-UK zabafundi baseCanada?
Ngaba zikho izikolo zonyango e-UK zabafundi baseMelika?
Kwisikolo ngasinye sezonyango, kukho iimfuno zokungenela ekulindeleke ukuba zingeniswe ukuze umfundi afaneleke ukuba amkelwe kwelo ziko. Apha ngezantsi kukho uluhlu lweeMfuno zokuNgena kwiSikolo sezoNyango kwizikolo zonyango e-UK. Ziquka:
Iimfuno zokungena kwezamayeza
Abafundi abafaka izicelo kwisikolo sezonyango e-UK ngokubanzi banezifundo ezimbini eziphambili zokukhetha; inkqubo yeyeza ye-A100 (eliyeza eliqhelekileyo lokungena) okanye iyeza le-A104 elinonyaka wesiseko.
Iikhosi ze-UCAS Medicine
Iyeza lokungena eliqhelekileyo (ikhowudi ye-UCAS: A100)
Iyeza lokungena eliqhelekileyo lihlala iminyaka emihlanu ubude kodwa linokuba mithandathu. Inokuba nezifinyezo ezahlukeneyo, ezifana ne-MBBS okanye i-MBChB, kodwa zonke iziphumo zikwisidanga se-bachelor kumayeza.
Baccalaureate yamazwe ngamazwe
Ngamaphi amanqaku angama-37 abandakanya ikhemistri kunye nesinye isifundo sesayensi.
Iziphumo zenqanaba le-A
I-AAA ibandakanya ikhemistri kunye nenye isayensi, njengezibalo, i-physics, i-biology, okanye i-psychology.
Umfundi ufanele abe namanqaku asi-7.5 xa ewonke, angabi ngaphantsi ko-7.0 kulo naliphi na icandelo elinye.
Ezinye iimfuno ezinjengombhalo obonisa iziphumo zesikolo samabanga aphakamileyo zomfundi, ileta yengcebiso evela kwinqununu nabanye ootitshala besikolo samabanga aphakamileyo somfundi, njl.
Ukuba umfundi ufaka isicelo kwisikolo sezonyango e-UK, kuya kubakho uluhlu lwezinto ekufuneka ziqwalaselwe. Nasi isikhokelo sokufaka isicelo kwisikolo sezonyango:
Izifundo ekufuneka uzifundele kwezamayeza
Kubafundi abavela eNgilani, eWales naseNorthern Ireland, zonke izikolo zonyango e-UK zamkela izicelo ezibonisa:
amabakala amahle e-GCSE kwimathematics, science nakwisiNgesi
indibaniselwano yee-GCSEs, amanqanaba e-AS, kunye ne-A-levels
chemistry kwinqanaba A kwaye rhoqo A-level biology
esinye isifundo senzululwazi siyafuneka, umzekelo, ifiziksi (okanye inzululwazi yendalo), okanye imathematika.
Ibakala elihle lika-A kwisifundo sobugcisa esinjengezembali okanye ulwimi lwale mihla liya kwamkelwa njengenqanaba elingu-A lesithathu.
Abafundi abanamabakala A angengawo ezenzululwazi badla ngokufuneka ukuba bafunde ikhosi yesiseko, eya kuthi yongeze unyaka kwikhosi yeminyaka emihlanu yesidanga.
Abafake izicelo kwizikolo zonyango e-UK abanezinye iziqinisekiso, ezifana ne-baccalaureate yamazwe ngamazwe, kufuneka baqhagamshelane nesikolo sezonyango okanye i-UCAS ukufumana iinkcukacha ngeemfuno ezilinganayo zokungena.
Kubafundi abangengabo abahlali base-UK? Kufuneka benze oku kulandelayo xa befaka isicelo kwisikolo sezonyango e-UK:
Fumana isikolo sezonyango esifanelekileyo
Abafundi kufuneka bashiye ixesha elaneleyo lokwenza uphando, ngaphambi kokufaka isicelo kwisikolo sezonyango. Oku kungenxa yokuba uphando luya kubanceda bafumanise ukuba loluphi uhlobo, ewe, oluya kubafanela kwaye luchaze into ekufuneka bayenze kwinkqubo yesicelo.
Khumbula, unokukhetha ukuya kutsho kwizikolo zonyango ezine kuphela, ngoko ke abafundi abaninzi basebenzisa eyesihlanu njengokhetho lokugcina, befaka izicelo kwiikhosi ezinxulumeneyo ezifana nenzululwazi yebhayoloji enamabanga asezantsi. Cinga ngeyiphi enye ikhosi onomdla wokuyithatha ngaphandle kweyeza.
Ukuya eyunivesithi ngeentsuku ezivulelekileyo kunye nokutyelela ikhampasi kuya kukunika umbono wokuba ubomi baseyunivesithi bunjani.
Ukubhala ingxelo yakho ephepheni
Eyona nto ibalulekileyo ekubhaleni ingxelo yakho asikokuyingxamela. Fumana imihla ebekiweyo, yisebenzise kwangoko kwaye uzinike ixesha elininzi lokulungiselela isicelo sakho.
Izikolo zonyango azifuni ukwazi nje ngamabakala akho, kodwa yonke into ngawe njengomntu. Thetha ngazo zonke izinto othe wazifumana ebomini bakho: izinto ozithandayo, izinto ozonwabisa ngazo, impumelelo yezemidlalo, amabhaso emfundo, iiprojekthi osebenze kuzo, amaqela oluntu obuyinxalenye yawo.
Ukufumana amava omsebenzi kwindima ekhathalayo
Enoba ngamatsha-ntliziyo okanye ngumsebenzi ohlawulayo, ukuba namava kwindima yenkathalo kubaluleke gqitha.
Ukufumana amava ngezandla kuya kukunika ingqiqo enkulu kubomi bemihla ngemihla bokuba ngugqirha kwaye ubonise ukuzinikela kwakho ekubeni ngugqirha.
Ngenisa isicelo sakho
Yiba noluhlu lokukhangela, jonga kabini isicelo sakho ngokuchasene nayo kwaye uqiniseke ukuba ubandakanya yonke into oyicelayo. Yiba nomhlobo, utitshala, ilungu losapho okanye umcebisi wemisebenzi ajonge kwaye ajonge zonke izinto zakho zesicelo.
Uninzi lwezikolo zonyango zineemfuno ezifanayo, kodwa kuxhomekeke kuwe ukuba ulungelelaniswe kwaye uqinisekise ukuba isicelo sakho sifunyenwe kwangexesha kwaye siquka yonke into efunekayo.
Iimvavanyo zokwamkelwa kwisikolo sezonyango
Ezinye izikolo zonyango zisebenzisa inkqubo ye-UCAS yoluhlu lweerhafu ukumisela iimfuno zokungena. Le nkqubo yamanqaku iseka uthelekiso ekuvunyelwene ngalo phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeziqinisekiso naphakathi kwabafaki-zicelo abaneentlobo ezahlukeneyo kunye nomthamo wempumelelo.
Ukongeza kwisicelo nge-UCAS, izikolo zonyango zifuna ukuba abafaki-zicelo benze iimvavanyo zokwamkelwa.
Uvavanyo lobuchule beklinikhi yeYunivesithi (UCAT)
I-UCAT isetyenziswa njengenxalenye yenkqubo yokukhetha kwizikolo zonyango ezingama-30 e-UK. Uvavanyo lwe-UCAT lujolise kwiimpawu zokuvavanya ezithathwa njengezixabisekileyo kubasebenzi bezempilo. Ijolise ekuqinisekiseni ukuba abafaki-zicelo abakhethwe kwisikolo sezonyango banezakhono zengqondo, izimo zengqondo, kunye nokuziphatha okufunekayo ukuze babe ngoogqirha abaphumeleleyo.
I-UCAT ikwabonelela ngeebhasari ezahlukeneyo kwabo bafuna inkxaso yemali ukuze bahlawulele uvavanyo, izicelo zivulwa ngoMeyi ukuya kuSeptemba minyaka le.
Ezona zikolo ziGqwesileyo zonyango e-UK zezi:
IYunivesithi yaseOxford yezoNyango sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango e-UK ezifundisa izifundo ezahlukeneyo zangaphambi kweklinikhi kunye nezifundo zeklinikhi, ezenza abafundi bafumane uphononongo olubanzi lwesayensi yezonyango, ngaphambi kokuba basebenzise olo lwazi kwimeko yeklinikhi.
IiKholeji zezoNyango eOxford zibonelela ngemfundo yomntu ngamnye kunye neyona nto ibalaseleyo kwinkxaso yobufundisi.
Bona iwebhusayithi yabo ngolwazi olungakumbi
IYunivesithi yaseCambridge sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango e-UK nezityebileyo kwimbali- iiKholeji zayo ezidumileyo kunye nezakhiwo zeYunivesithi zitsala abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela.
Kodwa iimyuziyam zeDyunivesithi kunye nengqokelela zikwaphethe ubuncwane obuninzi obunika umbono ochulumancisayo kweminye yemisebenzi yezifundiswa, yamandulo, neyangoku, yezifundiswa nabafundi beDyunivesithi.
Jonga iwebhusayithi ngolwazi olungakumbi
I-UCL sesinye sezikolo zonyango e-UK eyona yunivesithi ikwinqanaba eliphezulu enophando oluguqula ubomi kunye nendlela eqhubela phambili yemfundo, iyenza yahluke kwezinye.
Kwi-UCL, abafundi bafunda ngokwenza-ukubumba ihlabathi elibangqongileyo kunye nezandla-on approach.
Bona le webhusayithi ngolwazi olungakumbi
IKholeji yase-Imperial sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango e-UK ezibandakanya kwaye zibonelela ngezifundo ezikumgangatho wehlabathi, imfundo, kunye nophando kwisayensi, ubunjineli, kunye namayeza, ngokubhekisele kwisicelo sazo kushishino, urhwebo, kunye nokhathalelo lwempilo.
Bakhuthaza ukusebenza kwamacandelo ezifundo ezahlukeneyo ngaphakathi kwaye basebenzisana ngokubanzi nangaphandle.
King's sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango e-UK. Ibekwe kwiiyunivesithi eziphambili zehlabathi kwaye yeyona yunivesithi iphambili yaseLondon, ineekhampasi ezintlanu kwikomkhulu. Amaziko ethu, amaziko ethu, kunye nezikolo zibonelela ngophando oluhamba phambili kwihlabathi, nto leyo eyenza ukuba kufunyanwe izinto. Olu phando luxhasa yonke imfundiso kaKumkani kwaye lubenza bakwazi ukwenza umhlaba ube yindawo engcono.
King's sesinye sezikolo zonyango e-UK esahluke kakhulu kuluhlu olubanzi lweendawo zempilo ezibandakanya i-psychiatry, amayeza, ukonga, kunye nonyango lwamazinyo, kwaye isebenza nezibhedlele zokufundisa kunye neenkonzo zempilo yengqondo ezibanzi ukunika abafundi amava emfundo ecokisekileyo.
Isikolo sezoNyango sase-Edinburgh kwiYunivesithi yase-Edinburgh sesinye sezikolo zonyango e-UK. Yeyona inkulu yohlobo lwayo e-UK kwaye iqela lokufundisa linqwenela ukwenza amava apho uphando luxatyiswe kwaye luyinxalenye ebalulekileyo yobomi bomfundi ngamnye.
Isidanga seminyaka emithandathu seBachelor of Medicine and Surgery (MBChB) siya kukuxhobisa ngolwazi, ukuqonda, kunye nezakhono ezifunekayo ukuze ube ngugqirha weSiseko soku-1.
ILondon School of Hygiene & Tropical Medicine sesinye sezikolo zonyango e-UK eliziko elikhokelayo kwihlabathi kuphando kunye nemfundo enomsila kuluntu nakwimpilo yehlabathi.
Banoluhlu olulodwa kunye nobunzulu bobuchule bokudibanisa ilabhoratri, iklinikhi, abemi kunye nesayensi yezentlalo. I-LSHTM ilinganiswe kakhulu ngempembelelo kwaye uphando lwethu lunegalelo kumgaqo-nkqubo wezempilo kunye nokusebenza e-UK nakwihlabathi jikelele.
IManchester sesinye sezikolo zonyango e-UK. Yeyona yunivesithi yezonyango e-UK ukuba noxanduva lwezentlalo njengeyona njongo iphambili. Kubafundi, oku kuthetha ukuba sithatha ukuzinikela kwethu kuxanduva lwentlalontle.
Bakhuthaza abafundi ukuba babe yeyona nto banokuba yiyo kwaye benze umahluko kwihlabathi lokwenyani ngokuthatha inxaxheba kwiStellify.
IYunivesithi yaseGlasgow School of Medicine sesinye sezikolo zonyango e-UK esibonelela ngendawo enobubele apho abasebenzi kunye nezigulana zixhasa abafundi ekufundeni kwabo.
Ikhosi yabangekathweswa isidanga iMBChB yenzelwe ukuqinisekisa ukuba abafundi bayayifezekisa imigangatho eyimfuneko ngokwemigaqo yolwazi, izakhono, kunye nezimo zengqondo ezidingwa ngoogqirha abatsha, njengoko zichongwe yi-GMC kupapasho lwayo oluthi, 'IziPhumo zaBathweswa izidanga.
IYunivesithi yaseGlasgow sesinye sezikolo zonyango e-UK ebonelela ngothotho lweenkqubo zesidanga se-intanethi kunye nezifundo ezimfutshane kunye nee-MOOCs zasimahla (izifundo ezinkulu ezivulekileyo kwi-intanethi).
IYunivesithi yaseQueen Mary yaseLondon sesinye sezikolo zonyango e-UK esikhokela kumaziko emfundo ephakamileyo agxile kuphando.
U-Queen Mary sesinye sezikolo zonyango e-UK esibonelela ngezifundo zesidanga sokuqala, izidanga ezifundiswayo kunye nezidanga zophando zasemva kwesidanga kuzo zonke iinkalo zoluleko- kubandakanywa nezifundo abangasoloko bezifumana abafundi kwiyunivesithi yaseRussell Group. Khangela izifundo ozifundileyo.
Apha ngezantsi kukho uluhlu lwezona zikolo zonyango zilula e-UK umfundi anokukhetha ukufaka isicelo kuzo:
I-Queen's University iBelfast School of Medicine, iDentistry kunye neBiomedical Sciences
ISikole Sonyango saseHull York
IYunivesithi yaseDurham, iSikolo sezoNyango, iKhemesti kunye neMpilo
Isikolo soNyango kwiYunivesithi yaseSt Andrews
Isikolo soNyango kwiYunivesithi yaseBirmingham
Isikolo soNyango kwiYunivesithi yaseManchester
IYunivesithi yaseCambridge School of Medicine
Isikolo sonyango saseLeicester
Barts kunye neLondon School of Medicine kunye noNyango lwamazinyo
Izikolo zonyango e-UK azisimahla ngaphandle kwakwiimeko ezithile.
Ukuba umfundi okanye abazali bomfundi abangobahlali base-UK ngokuqhelekileyo, umfundi kufuneka ahlawule imali yokufunda kwangaphambili ukuze afanelekele ukuba ngugqirha e-UK.
Kodwa ukuba umfundi uhlala ehlala eSkotlani, urhulumente wengingqi yaseSkotlani uya kuhlawula iifizi zomfundi ukuze afundele isidanga sokuqala kuyo nayiphi na iyunivesithi yase-UK, kubandakanya neMedicine.
Ukuba umfundi okanye abazali bomfundi bahlala behlala eWales, e-UK, iNdibano yeNgingqi yaseWales iya kunika umfundi isibonelelo kunye nemali-mboleko yokufunda nasiphi na isifundo sesidanga osithandayo, kubandakanya amayeza, nakweyiphi na iyunivesithi yase-UK.
Ngaphambi kokuba ube ngugqirha wase-UK kufuneka uqale ufumane idigri yezamayeza kwisikolo sezonyango esineedigri zonyango esizamkelayo.
Ke, izifundo zonyango zihlala iminyaka emihlanu okanye iminyaka emine kwiprogram yokungena kwisidanga. Zibandakanya inzululwazi yezonyango esisiseko kunye noqeqesho lwezonyango eziwadini.
Emva kokuphumelela, umfundi uya kungena kwiNkqubo yeSiseko seminyaka emibini. Umfundi uya kubhaliswa okwethutyana nelayisenisi yokuziqhelanisa ngelixa egqibezela unyaka wokuqala. Ubhaliso olupheleleyo lunikezelwa xa ugqibe unyaka wokuqala.
Kukho inani lilonke lamashumi amathathu anesine ezikolo zonyango e-United Kingdom ezivunyiweyo yiGeneral Medical Council nalapho abafundi banokufunda khona isidanga sobugqirha.
Kukho izikolo zezonyango ezingamashumi amabini anesihlanu eNgilani, ezihlanu eSkotlani, ezibini eWales, yaye ezibini kuMntla Ireland. Kuyafaneleka ukuqaphela ukuba zonke izikolo zonyango e-UK kodwa iSikolo sezoNyango saseWarwick, iSikolo sezoNyango saseSwansea, kunye neYunivesithi yaseUlster zibonelela ngezifundo zesidanga sokuqala kwezamayeza.
Isikolo sezoNyango saseBute (iYunivesithi yaseSt Andrews) kunye neDurham Medical School zibonelela ngezifundo zabangekabinazidanga zaphambi kweklinikhi kuphela, nabafundi abaqhubela kwesinye isikolo sobugqirha kwizifundo zeklinikhi. Nangona iYunivesithi yaseOxford kunye neYunivesithi yaseCambridge zibonelela ngezifundo zangaphambi kweklinikhi kunye nezonyango kwezamayeza, abafundi abafunda amayeza angaphambi kweklinikhi kwenye yezi dyunivesithi banokufudukela kwenye iyunivesiti kwizifundo zonyango.
Kwezinye iidyunivesithi, abafundi bahlala kwiyunivesithi enye kwimisebenzi yonyango yangaphambi kweklinikhi kunye neyezonyango.
KwiYunivesithi yaseS Swansea
IKholeji yaseKumkani yaseLondon
I-25 + ye-MBA ephezulu ngaphandle kwamava eMisebenzi e-UK, e-USA nase-Canada
Ezona Yunivesithi zili-10 ziBalaseleyo zobuNjineli boBuchwephesha e-UK
Isifundo eUnited Kingdom | Jonga iiNkqubo kunye neeDigri
Yonke into ofuna ukuyazi malunga neMigration Laws UK
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ikhonkco elixhasiweyo
Post Previous:Izikolo ezi-2 eziPhezulu zezonyango eNew Mexico
Okulandelayo Post:Izakhono ezi-6 ekufuneka uzizuze ukuze ube nguSomashishini oMpumelelo